USB မှ Window တင်နည်း ~ မျိုးကို
USB မှ Window တင်နည်း
08:34 Technique, USB, Window 7, Window7OS Installation2comments
ဒီ Post ကို ကျွန်တော့် ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ ကိုဝင်းကမ္ဘာကျော် ဆိုက်မှ ကူးယူထားပါသည်.။
USB or DVD ထဲကို Bootable အဖြစ် ဖန်တီး ဖို့ အပေါ်ကလိုမျိုး ISO Images ဖိုင်တွေ လိုမှာပါ.. ..။ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ လေ့လာနိုင်အောင် မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှ ကို Kznt ရှင်းပြပေးထားတာလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။ နားလည်လွယ်အောင် ပုံလေးတွေနဲ့ တကွ တဆင့်ချင်း ရှင်းပြထားတာမို့ အဆင်ပြေကြမှာပါ...... အခု အပေါ်က Window 8 ISO Image ဖိုင်ကိုလည်း ဒီနည်းလမ်းလေးအတိုင်း Bootable အဖြစ် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်..။
Windows7USB/DVD Download tool ကို Install လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် -
1. Windows7USB/DVD Download tool ကို ဒီနေရာကနေ ရယူပါ။
2. Download Dialogue box တစ်ခု တက်လာရင် ကိုယ့်စက်ထဲမှာ သိမ်းထားချင်တဲ့ အခါ Save ကိုရွေးပြီး - တစ်ခါတည်း Run ချင်တာ ဆိုရင်တော့ Run ကိုနှိပ်ပါ။ လောလောဆယ်တော့ Save လုပ်လိုက်ပါမယ်။ ပြီးတော့ Download complete ဖြစ်တဲ့ အခါ exe file ကို ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အဆင့်လိုက် Run သွားပါ့မယ်။
3. ဖော်ပြထားချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီးသွားရင် Windows7USB/DVD Download Tool ကို ခုအောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို Install လုပ်ဆောင်ပြီးသား shortcut တစ်ခုအဖြစ် Desktop ပေါ်မှာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Note: Windows7USB/DVD Download tool ကို install လုပ်ဆောင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာကွန်ပြူတာကို အသုံးပြုသူဟာ အဲ့ကွန်ပြူတာရဲ့ Administrator ( သို့မဟုတ် ) Administrator access ရရှိထားသူ ဖြစ်ဖို့လိုသလို တကယ်လို့ လက်ရှိ Windows XP ကို သုံးနေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်မယ် ဆိုရင်လည်း အဲ့ Tool ဟာ Microsoft .NET Framework version 2.0 ဒါမှမဟုတ် သူ့ထက် version မြင့်မြင့် တစ်ခု install လုပ်ဆောင်ပြီးသား ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။
System Requirements များအား လေ့လာပါ။
Windows XP Users များအတွက်
Windows XP users များအနေနဲ့ Windows7USB/DVD Download tool ကို Install မလုပ်ဆောင်ခင် အောက်ဖော်ပြပါ applications များကို install လုပ်ဆောင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
* Microsoft .NET Framework 2.0 ကို Install လုပ်ဆောင်ထားရပါမယ်။ ဒီနေရာကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
* Microsoft Image Mastering API v2 Install လုပ်ဆောင်ထားရပါမယ်။ ဒီနေရာကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Windows7USB/DVD Download Tool အား အသုံးပြုခြင်း။
ပထမအဆင့် - ပြင်ဆင်ခြင်း။
• အနည်းဆုံး4GB နှင့် အထက် ပမာဏရှိသည့် USB flash drive
• Windows XP, Vista သို့မဟုတ်7စသည့် OS တစ်ခုခု တင်ထားသော Computer
• Windows7DVD သို့မဟုတ် .ISO file
• Download ချ၍ Install လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ရမည့် Windows7USB DVD Tool
အားလုံးပြည့်စုံပြီ - Install လုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင် Windows7USB DVD Tool ကို All Programs ကနေ ဖြစ်ဖြစ် - Shortcut icon ကနေဖြစ်ဖြစ် စပြီး Run ပါ့မယ်။
ဒုတိယအဆင့် - စတင်ခြင်း။
• ဒီအောက်က Screen ကို စတင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
• ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ ရှိနေတဲ့ Windows7.ISO file ရဲ့ တည်နေရာကို Browse ကနေ ညွှန်ပေးပါ့မယ်။ ပြီးရင် Next ကို ပေးပါ။
• ဘယ်လို media type ကိုသုံးမလဲ - ဒီအောက်မှာ ဆိုရင် ကျွန်တော် ဥပမာ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့က USB ကနေ Install လုပ်ဆောင်မှာ မို့ USB device ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ့မယ်။
• အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကိုယ့်စက်မှာ ဆင်ထားတဲ့ USB drive ကို drop down menu ကနေ တစ်ဆင့် ရွေးချယ်ပေးပါ့မယ်။ တကယ်လို့ ပျောက်နေသေးရင် Refresh ကို နှိပ်ပါ။ အဲတာမှ မတွေ့သေးရင် USB drive ကိုဖြုတ်ပြီး ပြန်တပ်ပါ။
• Begin copying ကို ဆက်နှိပ်ပါ။
• Windows7USB DVD Tool ကနေပြီး ISO File ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ files တွေကို USB drive ရှိရာဆီ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံအတိုင်းစတင် Copy ကူးပါလိမ့်မယ်။
• အကယ်၍ USB drive က နေရာလိုလို့ data တွေဖျက်ဖို့လိုမယ်ဆိုရင်လည်း ဖျက်လိုက်ပါ။
• အားလုံးပြီးသွားရင် USB DVD Tool ကို ပိတ်လိုက်ပါ။
တတိယအဆင့် - စမ်းသပ်ခြင်း
• အခု ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးပြီးသွားတဲ့ bootable USB drive ကို install လုပ်ငန်း မလုပ်ဆောင်ခင် အရင်ဆုံး ကောင်းမကောင်း စမ်းသပ်ကြည့်ပါမယ်။
• MobaLiveCD ကို ဒီနေရာကနေ ရယူပါ။
• MobaLiveCD က ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးထားတဲ့ USB drive ထဲက Windows ကို စက်မှာ တကယ် install လုပ်ဆောင်စရာမလိုပဲ စမ်းသပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
• ပုံမှာမြင်နေရတဲ့ Run the LiveUSB ကို Click ပေးပါ။
• ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ USB drive ကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Drop down menu ကနေ ရွေးပေးပါ။
• Windows7setup ဟာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
စတုတ္ထအဆင့် - Installation လုပ်ဆောင်ခြင်း။
• Nootbook မှာ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် - တစ်ခြား Laptops, Desktops တွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် USB ကနေ install လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် နည်း ( ၂ ) နည်း ရှိပါတယ်။ ရိုးရိုး OS ထဲကနေပဲ install လုပ်ဆောင်တဲ့ နည်းနဲ့ USB ကနေ boot လုပ်တဲ့ နည်းပါ။
• OS ရှိပြီးသား Windows ထဲကနေ install လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ USB device ရှိရာဆီ သွားပြီး setup.exe ကို double click ပေးလိုက်ယုံပါပဲ။
• အဲလိုမှ မဟုတ်ပဲ USB ကနေ Boot လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ BIOS မှာ ပုံမှန် လုပ်ဆောင်နေကျ အတိုင်း USB ကို 1st boot ထားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို Windows7ကို USB ကနေ install လုပ်ဖို့ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ရမယ် ဆိုတာ နားလည်နိုင်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
တစ်ခြား မေးစရာတွေ အသေးစိတ် လေ့လာစရာတွေ ရှိဦးမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာကနေ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
မင်း ထူး 1 May 2015 at 00:52
အကိုကျွန်တော့် computer windows7image ISO File 64-bit usb stick နဲ့ window တင်ခြင်လို့ ရှိရင်တင်ပေးပါလားခဗျာ
မင်း ထူး 1 May 2015 at 00:58